UZuma akamise esikhundleni uMaharaj - DA | isiZulu
UZuma akamise esikhundleni uMaharaj - DA
UMaharaj nonkosikazi baphika izinsolo
UMaharaj uphike izinsolo
I-M&G inabe ngezinsolo ezibekwa uMaharaj
Johannesburg - UMengameli uJacob Zuma kumele amise esikhudleni umkhulumeli wakhe uMac Maharaj, kusho iDemocratic Alliance, ngemuva kokuqubuka kwezinsolo ezithi yena nonkosikazi wakhe bahlomula kwithenda yamalayisense okushayela.
"IPhalamende angeke lilokhu liqhubeka lisebenzisana nomuntu ekunezinto ezingaqondile ngaye nosolisayo," kusho umkhulumeli we-DA uMmusi Maimane.
UMaimane uthi uzobhalela uZuma, amcele amise u Maharaj, wathi uzocela noMvikeli woMphakathi uThuli Madonsela ukuthi amphenye.
Izinsolo ngoMaharaj, zikhishwe yiphephandaba iMail & Guardian.
"Ukukhuluma kukaskwiza kaMaharaj kubeka obala ukuthi ikhona ngempela into eshiyo yilezi zinsolo. Konke lokhu kukhomba ukuthi abakwaMaharaj bahlomula enkampanini yezikhali iThales, eyagwazelwa nangusomabhizinisi uSchabir Shaik," kuqhuba uMaimane.
Iphephandaba libike lathi udadewabo kankosikazi kaMaharaj uShirene Carim, ulitshele ukuthi laba babebebeke izimali ebhange laseSwitzerland, okuyizimali ezazihlonyulwa emkhonyovini ophathelene nezincwadi zokushayela.
Ufisa abezepolitiki bafunde kosomatekisi
IMeya yomkhandlu uBuhlebezwe ephinda ibe umholi we-ANC esifundeni saseHarry Gwala eningizimu yesifundazwe iKwaZulu-Natal, uZamo Nxumalo ufisa sengathi ubuholi bezombusazwe kuleli bungafunda lukhulu kubuholi bemboni yamatekisi iSantaco endaweni yakhe eXobho.
Kushone abantu abangu-7 engozini yeveni nesitimela
Kushone abantu abangu-7 ngemuva kokuba isitimela sishayise iveni abebehamba ngalo eButtskop, ebeliwela kujantshi eBlackheath eKapa.
Bagwetshwe udilikajele abajumpula ikhanda lowesimame okhulelwe
Amadoda amabili alahlwe yicala lokunquma owesimame okhulelwe ikhanda, ase ezama ukulidayisa, agwetshwe udilikajele.